Ike mmiri, ọdịnihu nke ume ọhụrụ | Akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ Green
Ike mmiri, ọdịnihu nke ume ọhụrụ
Fausto Ramirez | | Ike mmiri, Ike imeghari ohuru
Kpa ye ụkọ nke akụ ndị sitere n'okike na ọhụrụ ihu igwe choro, na ike ikuku Ha na-anọchi anya taa ike dị ukwuu. O doro anya na ọtụtụ teknụzụ ike mmiri ka nọ n'ọgbọ nnwale ha, mana ha nwere ọtụtụ nkwa maka ọdịnihu n'ihe banyere nrụpụta ike na-aga n'ihu ma na-ebu amụma. Dịka ọmụmaatụ, ike ikuku bụ otu n'ime ndị enyemaka mmiri kachasị elu site na echiche teknụzụ, nke nta nke nta ọ na-etolite n'ọtụtụ mba ruo mgbe ọ ga-abụ ụzọ na-adigide ma na-agbakwunye ike emere maka mmeghari ohuru oge.
Na-erigbu nkwụsi ike nke oke osimiri
La ike ikuku Ọ bụ ike mmiri nwere ike imegharị sitere na mmiri mmiri, nke na-adịghị emetọ ma na-ewepụ ihe mkpofu. Ike nke ebili mmiri na-agbanwe ike ike mmiri nke mmiri mmiri ka ọ bụrụ ọkụ eletrik, n'otu ụzọ ahụ ifufe si agbanwe ike ikuku.
Igwe a na-eme ka o kwe omume ịmịpụta ike na ọsọ ọsọ dị ala na-agba ọsọ na nke ugbu a. Ike nke ugbu a kpatara ebili ọ nwere ike sie ike karịsịa n'akụkụ ụfọdụ na mbara ala dị n'akụkụ ụsọ oké osimiri, ala, isi ma ọ bụ estuaries, dịka ọmụmaatụ, si otú a na-anọchite anya isi iyi dị ike.
N'ihe banyere ụkọ nke mmanụ ala fosili, Nrigbu nke mmiri mmiri na-enye echiche ndị a na-emegharị na nzube ọhụrụ nke mmepe na-agbanwe agbanwe na ike mgbanwe.
La ike ikuku Ọ na-enye nkọwa nke mkpụrụ mbụ nke mmepụta nke nwere ike kwụsie ike na nke a na-ahụ anya, na-erigbu ike nke mmiri site na turbine na-agbanwe agbanwe. N'ụzọ dị otú a, a na-eji ịrị elu na ọdịda nke ebili mmiri. Ọ bụ teknụzụ na-ekwe nkwa na obere ụgwọ gburugburu ebe obibi n'ihi nnukwu arụmọrụ nke akụrụngwa ya na Producción ọzọ prediktebul na dịtụ mgbe nile. A ga-eji oge niile nke mmiri na ebili mmiri tụnyere ume ọhụrụ na-agbanwe agbanwe, dị ka ike anyanwụ ma ọ bụ ike ikuku.
N'ezie, ọ bụrụ ego akwụ ụgwọ na nrigbu metụtara mmiri gburugburu ebe obibi nwere ike ịbụ elu, mmetụta na gburugburu ebe obibi nke tidal ike fọrọ obere. Nwere obere ihe ngosi anyaHa gbara nkịtị ma kụọ na mpụga ebe ịkụ azụ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ Green » Ike imeghari ohuru » Ike mmiri, ọdịnihu nke ume ọhụrụ
Karịrị ike nke ebili mmiri bụ nke ebili mmiri na-ebugharị mgbe niile, enwere m teknụzụ maka nke a, kedu njikọta m nwere ike ịnye?
Zaghachi jose castillo
Imebi mmiri site na iji graphene nanorobots
80% nke mmiri olulu mmiri China nwere oke mmeru ka a ghara ị drunkụ ya